Management | PRO-X Software Solution
Micromanagement မလုပ်မိအောင် မန်နေဂျာများရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အမူအကျင့် ၆ မျိုးစီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက်နေရာယူပြီး လုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတာ သိဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အကြီးအကဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စီမံရသလို လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် အမြဲလုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲရတာ ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဆိုပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေကို လုပ်ပိုင်ခ...
Visits : 3736
ထိပ်သီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့ လူအများရှေ့စကားပြောဆိုနည်း ၅ မျိုးစွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အလယ်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဆိုတင်ဆက်ချိန်မှာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေ ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်လာအောင် ပြောဆိုစည်းရုံးတတ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ရမယ်။ကြီးပွ...
Business တစ်ခုအတွက် New Customer နှင့် Existing Customer ဘယ်အရာက ပိုအရေးကြီး သလဲ
Business တစ်ခုအတွက် New Customer နှင့် Existing Customer ဘယ်အရာက ပိုအရေးကြီး သလဲ? Business တစ်ခုအတွက် Customer က အဓိက အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ တချို့ဆို "Customer is God" ဒီလိုတောင် တင်စားထားပါသည်။ New Customer နဲ့ Existing Customer ဘယ်အရာက ပို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ ၂ ခုလုံးကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ Existing Custome...
67 - 72 of ( 73 ) records